Jaamacadda Edna Oo Munaasibad Soo Dhawayn Ah U Samaysay Ardayda Cusub+Sawiro
(Hadhwanaagnews) Thursday, November 22, 2018 13:20:04
Hargaysa(HWN)Jaamacadda Caalamiga Ee Edna Aadan University ayaa munaasibad soo dhawayn ah u samaysay ardayda cusub ee sanadkan ku soo biiraysa jaamacadda Adna faracyadeeda kala duwan.
Munaasibada oo si balaadhan loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb-galay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda Edna,ardayda cusub iyo marti sharaf aad u badan,kuwaas oo dhamaantood waalidiintii madasha ka soo qayb galay u qushuceen sida ardayda loogu war galinayo in ay noqdaan qaar ka midha dhaliya hadafkooda waxbarasho.
Munaasibadan oo ujeedadeedu ahayd sidii ardayda cusub loogu war galin lahaa nidaamka iyo shuruucda u yaala
jaamacadda Edna iyo sidii looga baahan yahay in ay ardaydu dadaal dheeraad ah muujiyaan inta ay ku jaraan jaamacadda madaama oo ay baranayaa aqoonta caafimaad oo u baahan in ardaydu inta ay ku jiraan hayaanka waxbarasho ay muujiyaan dadaal dheeraad ah.
Ugu Horayn waxa xafladda furay guddoomiyaha Jaamacadda Caalamiga Ah Ee Edna Aadan Maxamed Mixile Boqore waxaana uu sheegay in ardayda cusub looga baahan yahay in ay dadaal muujiyaan madaama oo ay nasiib u heleen in ay ka mid noqdaan jaamacadda adna oo markasta lagu tiriyo jaamacadda ka dhisan xaga aqoonta caafimaadka ee ay bixiso.
“Waxaad nasiib u hesheen inaad ka mid noqotaan jaamacadda lagu og yahay tayadda waxbarasho ee adna,waxan aad baranaysaan waa caafimaad iyo fakalo kale waxa loo baahan yahay inaad muujisaan dadaal dheeraad ah isla markaasina aad dhexda u xidhataan inta aad ku jirtaan hayaan waxbarasho.
Intaas waxa uu ku daray guddoomiyaha jaamacadda Edna Isaga oo hadalkiisa siiwata.”waxa laydinka doonayaan inaad u hogaan santaan shuruucda jaamacadda idinka oo fulinaya amarada ka soo baxay maamulka ee la xidhiidha nidaanka ay jaamacadu leedahay,kolay casharadda waxa bixinaya khuburo ajihanib ah oo ku takhakhusay cilmiyadda ay bixinayaan taasi oo la odhan karo jaamacadda adna oo markii horeba lagu yaqaanay tayo wanaagsan haddana si ay ardayda ay waxbarayso aqoontooda kor u sii qaado ayay haddana isku hawshay in ay idiin keento aqoon yahan takhakhus ku ah cilmiyadda ay bixinayaan,kuw soo dhawaad jaamacadda adna dhamaantiin.
Mustafe Xasan Daahir Guddoomiye ku xigeenka jaamacada Edna Qaybteeda Maamulka Iyo Lacagta ayaa isaguna ardayd cusub ku soo dhaweeyay jaamacadda adna waxaana uu sheegay in wixii lacag ah ardaydu ay u mari doonaa dariiqyadda saxda ah bixintooda,isaga oo ardaydana ugu bushaareeyay in ay yimadeen jaamacadda tayadda aqoonta hormuud ugu ah jaamacadda dalka.
Naasir Foosi Guddoomiye ku xigeenka qaybta Waxbarashadda ee Jaamacadda Edna Iyo Ibraahim Cali Hassan ayaa dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyay ardayda waxbarashadda cusub ka bilaabaya jaamacadda caalamiga ah ee Edna.